Indray mijery | NewsMada
Mandray anjara amin’ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny asa, izay fanao isan-taona, any Genève Soisa, ny filoham-pirenena. Manamarika ny faha-100 taony ity fivoriambe ity ka anisan’ny andrandraina hivoaka ao anatin’izao dinika iraisam-pirenena izao ny fifanarahana iombonan’izao tontolo izao mikasika ny herisetra sy ny fanambarana mikasika ny hoavin’ny asa manoloana ny fanamby vaovao, toy ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny teknolojia vaovao. Nanomboka ny alatsinainy teo ary tsy hifarana raha tsy ny 21 jona izao ity fivoriambe ity.
Manoloana ny tsy fahampian-drano madio fisotro, indrindra any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy, tsy mitsaha-mitady vahaolana hatrany ny governemanta, amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Angovo sy ny rano. Fantatra àry fa hisy ny tetikasa fampidiran-drano, amin’ny alalan’ny fantsona sy fitrandrahana rano any ambanin’ny tany na “forages” ary amin’ny fametrahana paompin-drano. Tombanana hahatratra 1,4 tapitrisa ny isan’ny mponina hahazo rano madio fisotro amin’ity taona 2019 ity.
Araka ny tombantomban’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, mbola hitohy ny rivotra mifofofofo, izay mety hahatratra hatramin’ny 65 km isan’ora, any amin’ny ranomasina any atsinanan’ny Nosy, hatramin’ny rahampitso. Vokatr’izany, mbola hahery hatrany ny ranomasina, indrindra any amin’ny Cap d’ambre. Mety hahatratra 3 na 4m ny haavon’ny onja ka tokony haato ny fandehanana miandriaka.